Somaliland iyo shacabka Cayn oo lakala wareegaya maxaabiis ay horay u kala-qabsadeen. – Radio Daljir
Agoosto 12, 2012 12:57 g 0
Caynaba, Aug 12 – Degmada Caynaba ee gobolka Sool maantay waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagula-kala-wareegayo maxaabiis ay u horay u kala-qabsadeen maamulka Somaliland iyo shacabka deegaanka gobolka Cayn.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in xaflada lagu qabtay degmada Caynaba ay goob-joog ka yihiin masuuliyiin sare oo ka tirsan Somaliland iyo wafti uu hoggaaminayo Saleebaan Ciise Axmed ‘Xaglatoose’ oo ah siyaasi kasoo jeeda gobolka Cayn.
Munaasabadaan ayaa salka ku-haysa hishiis nabadadeed oo magaalada Hargaysa ay dhawaan kuwada gaareen madaxwaynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud ‘Siilaanyo’ iyo Saleebaan Ciise Axmed Xagla’toosiye.
Dhawaan ayay ahayd Saleebaan Xagla’toosiye markii uu Garowe kulan-kula qaaday madaxwayne Faroole, waxaana illaa iyo xilligaan aan la saadaalin-karin damaciisa xildoonasho ee ku aadan maamullada Puntland iyo Somaliland.